Iwo mavara ari mukati Art sens - mazano eimba nebindu
Colors mune zvemukati dhizaini. Mavara emazuva ano uye kukosha kwemavara mukati. Kubatanidza kwemavara uye mavara emazuva ano. Ruvara sechaunonyanya kutarisa mumba. Pfungwa dzemavara mukati.
Yemukati dhizaini reimba mbiri yekurara mukamuri yebhuruu uye beige
Bhuruu uye beige inguva yakasanganiswa yeiyo inopenya chimiro uye aristocracy,
Kugara Yekufunga Pfungwa - Yemukati yemukati ine bluu yebhuruu
Iyo yekugara mifungo inoratidzwa pazasi inomiririra akasiyana dhizaini masini e
Kugara Yekufunga Pfungwa - Dzazvino Dhizaina Tsvuku Tsvuku
Idzi dzimba dzekugara mazano edzimba kune akati wandei magadzirirwo emukati ano ndeazvino
Imba yekutandarira mazano - yakajeka yemukati mhinduro
Pfungwa dzeimba yekutandarira dzakaratidzwa pano dzinotarisa pane zvigadziri zvavanovimba nazvo
Kugara Kamuri mazano - Mazuva ano Dhizaina MuBrown
Nezvazvino zvekugara zvekugara pfungwa dzakatarisana nezvimwe zvigadzirwa zvemazuva ano
Nemazano aripo ekushongedzwa kwemukati meimba yekutandarira pakati pe15
Imba yekutandarira mifungo iri brown, beige uye chena
Nemazano eimba yekutandarira inoratidzwa pano brown, beige uye
Kugara Kamuri Dhizaina mazano - Rima Floor Uye Chiedza Sofa
Mune mazano akasiyana-siyana ekugadzirwa kwemukati meimba yekutandarira kunogona
Dhizaina mazano mune yero-brown
Nezvazvino zvekugadzira mazano mune yero-brown brown ichauya
Pink kicheni dhizaini mazano
Pink kicheni dhizaini haina kujairika
Kujeka kwakapatsanurwa mhinduro kuimba yekutandarira nekicheni
Kana zvasvika kune yakajeka inopesana yemukati mhinduro yekamuri yekugara
Classic chena kicheni ine zvishongo zvegoridhe
Classic chena ingangove imwe yezvinowanzoitwa sarudzo
Dhizaini yeimba yekutandarira yepepuru
Iko kushandiswa kwe violet mukugadzirwa kwemukati, uye kunyanya kwe
Dhizaini yekicheni mune vanilla kana champagne ruvara
Vanilla kana champagne ndiwo mazita akasarudzwa nenzira kwayo, mazita akasungwa e
Yemukati yemazuva ano ine chimiro chakanaka muchiedza, beige toni. Chiono chose che
Magadzirirwo akaunzwa pano anopa sarudzo dzinoverengeka dzemukati musanganiswa wetsvuku uye chena.